Imaski ezilahlwayo, Kn95mask Medical Sebenzisa, Anti Uthuli yemfazwe - EISEN
I-EISEN INDUSTRY LIMITED (KUANGYE DONGGUAN TECHNOLOGY CO., LTD) ifumaneka kwilali yaseLianhu, eTangxia Idolophu, kwisiXeko saseDongguan ngezothutho olufanelekileyo, kunye nendawo yokwakha engaphezu kweemitha zesikwere ezingama-5,000. Okwangoku, izixhobo zoomatshini zenkampani zibandakanya: imigca eli-10 yendibano ezenzekelayo, ngaphezulu kweemaski zonyango ezilahlwayo ezingama-40 kunye neKN95 FFP2 yemigca yemveliso ezenzekelayo, ilabhoratri epheleleyo yombane, kunye nokusekwa kweqela lesithathu eliqinisekisiweyo le-workshop yenqanaba elingena-100,000, 10,000 -level ilebhu yonyango, njl. amandla emveliso kunye neqela labasebenzi abaqeqeshiweyo.
Umgangatho ophezulu we-FFP3 NR ye-Earloop engeyiyo eyonyango
Umgangatho ophezulu wobuso beFFP2 NR obungeyonyango
I-5 ply KN95 / FFP2 Imaski engeyiyo yezoNyango
5 ply KN95 Isigqumathelo sobuso esinganyangiyo
3 Ply zokhuseleko ubuso buso
3 Ply Banokubusiswa Ubuso buso beMaski
Nxibelelana nathi ukufumana uncedo olungakumbi
Nceda uqiniseke ukuba ukhetha thina, siya kukubonelela ngesisombululo esifanelekileyo.
Le nkampani iye yaphumelela ISO13485 & GMP isiqinisekiso inkqubo esemgangathweni isixhobo zonyango, kwaye wafumana iphepha-mvume imveliso yesizwe eziziimveliso zonyango, kunye neemveliso zayo sele kudlule isatifikethi samaziko yobungcali ekhaya nakumazwe aphesheya.
Imigca ye-10 yendibano ezenzekelayo, ngaphezulu kwe-40 iimaski zonyango ezilahlwayo kunye ne-KN95 yemigca yemveliso ezenzekelayo, ilabhoratri epheleleyo yombane, kunye nokusekwa kweqela lesithathu eliqinisekisiweyo le-100, i-000 yenqanaba lokusebenzela elingenothuli, ilabhoratri yezonyango engama-10,000, njl.
Ingathatha ixesha elingakanani imaski? Ngaba kuyimfuneko ukugcina iimaski? Ngenxa yesithsaba somoya omtsha inyumoniya, iimaski zinxitywe phantse isiqingatha sonyaka.
I-Coronavirus entsha iguqukile eSpain ukunqanda ukuphindaphinda kwembali. I-Bhritane, i-France, i-Itali ne-Jamani ivule uMgaqo-nkqubo weBlockade kwakhona i-coronavirus entsha iguquka eSpain Ngexesha leHalloween, ngokwe-TIMES, i-Bhritane izakuvota ePalamente kwiveki ezayo. Ngenxa yokuqhambuka kwesibetho ...
UGeng Shuang Ugxininise ukuba kuLuntu lwaMazwe ngaMazwe lokuLwa neCoronavirus eNtsha, Nceda uhlonele iinyani, iSayensi kunye nabanye.
UGeng Shuang Ugxininise ukuba kuLuntu lwaMazwe ngaMazwe lokuLwa neCoronavirus eNtsha, Nceda uhlonele iinyani, iSayensi kunye nabanye. Ngomhla wamashumi amabini kweyoKwindla, isithethi somphathiswa wezangaphandle u-Geng Shuang wakhokela inkomfa noonondaba rhoqo. Intatheli ibuzile, kutsha nje, abanye babafundi baseNtshona bathi th ...